Sida loo buuxiyo telefoonka gacanta sida ay shirkaddaadu tahay
Telefoonka kor u qaad
Waxaan ku noolnahay adduun ay isgaarsiintu noqdeen lama huraan, waana sababta aan had iyo jeer ugu xirnaanno kumbuyuutarrada, tablet-yada iyo gaar ahaan taleefannada gacanta.
Dad badan ayaa doorbidaya inay kiraystaan ​​​​qiimaha internetka ee hore loo bixiyo, kuwa kale waxay xakameeyaan dheelitirkooda qaybo yaryar waqti ka waqti, xaalad kasta, dib-u-celinta ayaa weli ah nidaam lagama maarmaan u ah qof kasta.
Shirkadaha isgaarsiintu waxay ku siinayaan habab kala duwan oo aad ku dalacsan karto mobilka, waxaad ku dallaci kartaa hadhaaga moobilkaaga khadka, adoo wacaya ama shaqsi ahaan u tagaya wakiilada idman.
Waxaan kuu sheegaynaa dhammaan wixii ku saabsan dib-u-kicinta taleefanka ee shirkadaha waaweyn ee gudaha iyo dibadda Spain.
Ku shub mobiil online
Waqtigan xaadirka ah, waxaa suurtagal ah in aad dib u dalacdo baaqigaaga mobaylka adiga oo jooga gurigaaga ama aad ku shaqeyso caawinta kombuyuutar leh marinka internetka.
Inta badan shirkadaha isgaadhsiinta waxay kuu oggolaanayaan inaad sidan u maamusho ku shubista mobilada, maahan kaliya Spain, laakiin meel kasta oo aduunka ah ilbiriqsiyo gudahood.
Hawlgallada lagu dallaci karo moobilka khadka tooska ah waa kuwo aad u fudud, kaliya u gudub bogga internetka ee talefanka gacanta, qor lambarka taleefanka iyo baaqiga si aad dib ugu dalacdo.
Nidaamkan, waxaad leedahay faa'iido aad ku badbaadinayso wakhti badan oo aad ku bixin karto arrimo badan oo muhiim ah.
Waxa kale oo aad ku shuban kartaa baaqigaaga moobilkaaga. Waa inaad haysataa hal kombuyuutar oo leh marin shabakadeed. Guud ahaan, codsigu waa bilaash wuxuuna diyaar u yahay IOS (App Store) iyo Android (Google Play dhexdiisa), soo deji oo dib u buuxi taleefankaaga mar kasta oo aad rabto.
Hel dheelitirka mobilada
Inkasta oo habka ugu fudud ee wax lagu shubto ay tahay online, waxaa sidoo kale jira habab dhaqameed oo lagu iibsado credit. Waxaa lagu dallaci karaa:
Fariin qoraal ah (SMS)
Dukaamada iyo xarumaha la oggolaaday
Adeeg si toos ah u dallacaadda
Isku dheelitirka wareejinta
In kasta oo, hawl-wadeennada qaarkood ay ku kala duwan yihiin hab-socodka, haddana dhammaantood waxa ay ku urursan yihiin ujeeddooyinkooda: dib-u-soo-celinta dheelitirka.
Marka xigta, waxaanu kuu dhaafnay liis si aad si faahfaahsan ugu barato habka dib u dalacsiinta mobilada ee hawl wadeenada telefoonada ee ugu muhiimsan Spain:
Sida loo dallaco Oi Brazil
Dib u soo deji Express TV
Dib u buuxi Cirka
Kor u qaad Paysafecard
Kordhi kaarka dib u bixinta lacag bixinta
Sidee dib loogu buuxiyaa Iliad
Dib u dalacsiinta Telekom ee horay loo bixiyay
Dib u dallaci SFR
Dhaqan Nuuri kaarka dib u buuxinta
Hubi dheelitirka mobaylka Waxaanu u sharaxnaa sida loo sameeyo talaabo talaabo!
Dib u buuxi Claro Argentina
Kor u qaad mobilka Jazzpanda
Dib u dalacsiinta mobilka Digitel
Ku soo shub mobilka Cubacel
Ku soo dallaci mobilka Pepephone
Sida dib loogu dallaco República Móvil?
Ku soo dallaci taleefanka gacanta ee hore loo bixiyay MásMóvil. Heerarka
Mobilka ka soo shubo bangigaaga
In kasta oo dad aad u yar ay garanayaan, bangiyada waxay sidoo kale bixiyaan adeegga dib-u-dalacsiinta baaqyada mobilada si badbaado leh. Runtu waxa ay tahay in ay soo badanayaan hay’ado u fududeeya hawlahan lacag bixinta macaamiishooda, adeegan waxa laga bixiyaa ATM-yada, xafiisyada bangiyada ama mareegaha bangiga si aanad guriga uga bixin.
Bangiyada dhaqameed ee Spain ayaa adeegan bixinayay in muddo ah. Si kastaba ha ahaatee, bangiyada kale ee da'da yar weli kuma darin farsamadan nidaamkooda. Aan hoos aragno bangiyada ugu amaanka badan ee lagu dallaci karo baaqigaaga mobilada.
Bangiyada badankoodu waxay sidoo kale bixiyaan adeegga bangiyada mobilada. Iyada, waxaad dib u buuxin kartaa dheelitirkaaga meel kasta oo aad joogto, adigoo isticmaalaya raaxada taleefankaaga gacanta. Guud ahaan, liiska telefoonnada gacanta ee lagu shuban karo habkan waa mid aad u ballaaran, si aan qofna looga tagin.
Kor u qaad kaarka lacagta hore ee Hype
dib u dallaca TIM
Dib u buuxi PCS
Kor u qaad Aldi Talk
Ku shub mobilka kaadhka
Dib u dalacso mobilka BBVA
Ku buuxi mobaylka Santander
Ka soo rog moobilka ING
Dib u buuxi mobilada La Caixa
Ku dallaci mobilada ka baxsan Spain
Hadda ku dallacaadda taleefannada gacanta ee ka baxsan Spain aad bay u fududahay. Markaad u safrayso meel ka baxsan Spain waxaad sii wadan kartaa la xidhiidhka qoyska iyo asxaabta dhib la'aan. Maanta, waxaa suuqa ka jira shirkado telefoon oo kala duwan oo si hufan u bixiya adeeggan.
Sidoo kale, haddii aad saaxiibo iyo qoys ku leedahay waddamo kale, waxaad sidoo kale u diri kartaa baaquli adiga oo ku bixinaya euro. Sida ugu fiican ee mobilkaga dibeda loogu shuban karo waa webka, adigoo isticmaalaya kombayutarkaaga ama inaad codsi ku soo dejiso mobilkaaga.
Waxa kale oo jira meelo fool-ka-fool ah oo kuu ogolaanaya inaad ku bixiso credit-ka mobilada wadamada kale. Goobaha ama xarumaha uu adeeggu ka jiro waa: xarumaha wacitaanka, dukaamada, adeega iskaa-wax-u-qabso ama dukaamada.
Waan ognahay in ka fogaanshaha kuwa aad jeceshahay ay kugu adkaan karto, laakiin mahadda sixirka isgaarsiinta waxaad dareemi kartaa inaad aad ugu dhowdahay. Halkaan waxaan ku tusineynaa dhowr ikhtiyaar oo aad kula xiriiri karto kuwa aad jeceshahay.
Ka soo dalac mobile ka Peru
Ka soo dalac mobilka Chile
Ku shub mobilada Mexico
Ku buuxi mobilkaaga Venezuela
Ku soo celi taleefanka gacanta Ecuador
Mobilka ka soo qaado Bolivia
Kordhi mobilada Colombia
Rebtel taleefoonka gacanta ku shubista iyada oo aan lahayn komishanka
Si fudud oo degdeg ah ugu buuxi mobilka Telcel
Si fudud oo degdeg ah ugu buuxi mobilka Suop
Ku shubista Soriana mobilada
Ku shub mobilnetka mobilada
Mobilka ka soo qaado Dominican Republic
Ku shub mobilka Cuba
Siyaabo kale oo kala duwan oo mobilka dib loogu dalacsiin karo
Ikhtiyaarada aad ku dalacsiin karto dheelitirka taleefankaaga gacanta maalin kasta ayaa ka sii weyn. Hawl-wadeennada telefoonku waxay ku siinayaan habab kala duwan oo aad ku shuban karto mobilka, marka aanad marin u lahayn shabakadda. Tusaale ahaan, wakiilada idman ee bixiya adeega dib u dallaca ee hawl wadeenada kala duwan ee telefoonada ama dukaamada aad ka iibsan karto kaararka horay loo bixiyay.
Kaararkan prepaid-ka ah waxay la socdaan xaddi kala duwan oo kuu ogolaanaya inaad doorato qaddarka lacagta aad rabto inaad geliso khadkaaga gacanta. Isticmaalkooda waa toos, kaliya raadi koodka hawlgelinta oo ku buuxi tilmaamaha dhabarka.
Ku soo dallac ama ka iibso kaarka lacagta lagu bixiyo: dukaamada, boostada ama xafiisyada ganacsiga, dukaamada gaarka ah, kaalmaha shidaalka, dukaamada waaweyn, dukaamada waaweyn, wakaaladaha safarka, xarumaha wacitaanka, iwm.
Internet Mobile aan xadidnayn
Waxaa jira heerar u oggolaanaya isticmaalyaashooda baadho oo soo dejiso aan xad lahayn. Suuqa dhexdiisa waxaa jira hawl-wadeeno bixiya gigabytes aan xadidnayn ama xog badan, iyaga oo ilaalinaya inta badan kiisaska xawaaraha isku midka ah.
Guud ahaan, noocyadan sicirrada waxaa lagu heshiin karaa baakadaha dhexdooda. Gudaha Spain qaar ka mid ah shirkadaha bixiya navigation aan xadidneyn ama aan xadidneyn waa: Vodafone iyo Yoigo. Waxa ugu wanagsan waa in aad kaga faa'iidaysan karto wadamada kale ee Midowga Yurub.
Waxa kale oo jira hawl-wadeenno, in kasta oo qiimahoodu aanu xad lahayn, haddana ay tiro badan yihiin ku dhawaad ​​gigs aan xad lahayn si deggan ugu dhex socdaan bisha oo dhan. Shirkadahaas waxaa ka mid ah: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil iyo República Móvil.
Qiimaha ka mid ah heerarka la heli karo way kala duwanaan doonaan marka loo eego xogta ay bixiso shirkadda telefoonku. Kuwani waxay u dhexeeyaan xaddidan ilaa ku dhawaad ​​aan xadidnayn oo ah daalacashada ilaa 50 Gb. Xalka isticmaalayaasha si degdeg ah u isticmaala internetka.
Macluumaadka ku saabsan buskudka
Kor u qaad Mobile 2022 - Sida loogu shubo taleefankaaga gacanta talaabo talaabo